Home Wararka Doorashada Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka oo maanta dhacaya & Villa Somalia oo wadata….
Doorashada Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka oo maanta dhacaya & Villa Somalia oo wadata….
Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer Federal (FIEIT) oo uu 19-June-2021 magacaabay ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa Muuse Geele Yuusuf waxa uu u doortay guddoomiye KMG ah oo fududeynaya doorashada guddoomiyaha iyo kuxigeenka FIEIT si loo fududeeyo hirgelinta doorashada xubnaha Baarlamaanka Federaalka.
Wararka ayaa sheegaya in Villa Somalia ay taageero hiil iyo hooba leh la garab taagan tahay islamarkaana u ololeyneyso in uu xilka guddoomiyaha Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer Federal (FIET) ku soo baxo Maxamed Muuse Maxamuud oo gacansaar iyo saaxiibtinimo gaar ah la leh Villa Somalia.
Previous article[Warbixin] Maamulka Farmaajo oo ku lug leh xaalufinta kaluunka Somalia oo la kashifay
Next article[XOG] Hanti Dhowrka oo musuqa Cumar Filish u gudbiyay Farmaajo
Dad shacab ah oo hantidoodii la burburiyay iyada oo la isticmalayo...